The Ab Presents Nepal » वृद्ध भत्ता बढेपछि ज्येष्ठ नागरिक भन्छन अब नेकपाका कहिले चुनाब हार्दैन “मुहारमा खुशी थपियो दैनिकी सहज हुने भो” !
वृद्ध भत्ता बढेपछि ज्येष्ठ नागरिक भन्छन अब नेकपाका कहिले चुनाब हार्दैन “मुहारमा खुशी थपियो दैनिकी सहज हुने भो” !
१८ जेठ, पाल्पा । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएपछि बेझाड क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकमा खुशीयाली छाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमार्फत ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै भत्ता वृद्धि गरेपछि उनीहरुमा उत्साह छाएको हो ।
यसभन्दा अगाडि बुझ्दै आएको रकममा उनीहरुको रु एक हजार भत्ता वृद्धि भएको छ । सरकारले भत्ता वृद्धि गरेको सुनेपछि पाल्पा रामपुर नगरपालिका वडा नं ५ बस्ने ९८ वर्षीय नरहरि उपाध्यायले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दुई हजार भत्ता बुझ्ने गरेकोमा अब एक हजार थप भई तीन हजार बुझ्न पाइने भएपछि खुशी लागेको बताउनुभयो । “हामी जस्ता काम गर्न नसक्ने अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले हेरेर भत्ता बढाएको छ, अरुसँग माग्न परेको छैन, असाध्यै खुशी लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
फाइल तस्बीरः तस्बीरमा नुवाकोट स्थायी घर भएकी टोखा नगरपालिका गोंगबुकी छत्रकुमारी पुडासैनी ।
गएको जेठ १५ गते आव २०७६÷७७ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता तीन हजार र एकल महिलाको मासिक रु दुई हजार पु¥याएको छ । यसअघि वृद्धभत्ता मासिक दुई हजार र एकल महिलालाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिइँदै आएको थियो । त्यस्तै अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजाति समेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि एक हजार बढाइएको छ ।
सरकारले गरीबीको रेखामुनि रहेका परिवार र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ । सत्तरी वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको एक लाखसम्म बीमा रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारमा पनि बीमा रकम दोब्बर गरी एक लाख पु¥याउने भएको छ ।रासस